မူးတယ်၊ မောတယ်၊ သံဓာတ် အားနည်းတယ်ဆို ဘာစားကြမလဲ - Hello Sayarwon
မူးတယ်၊ မောတယ်၊ သံဓာတ် အားနည်းတယ်ဆို ဘာစားကြမလဲ
Update Date ဇွန် 23, 2020 .2mins read
ခေါင်းနည်းနည်း မူးတယ်၊ အသက်ရှူ မဝသလို မောတယ်၊ ရင်တုန်တယ်၊ လှုပ်လိုက်တာနဲ့ အားကုန်၊ အားမရှိသလို နုံးနေတယ်ဆိုရင် သံဓာတ် အားနည်းနေတာ ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
သံဓာတ် ပြည့်ဝအောင် မစားခြင်း၊ အူရောင်ရောဂါ၊ ကိုယ်ဝန်ဆောင်ခြင်း၊ ရာသီသွေးဆင်းများခြင်း စသဖြင့် သံဓာတ်အားနည်းခြင်း ကို ဖြစ်စေတဲ့ အကြောင်းရင်းက အများကြီးရှိနိုင်တယ်လေ။
ဒါပေမယ့် ဘာကြောင့်ပဲ ဖြစ်ဖြစ်ပါ၊ အချိန်မီ ပြန်လည်ဖြည့်တင်းဖို့က အရေးကြီးပါတယ်။ မဟုတ်ရင် နောက်ဆုံးကျ ကျန်းမာရေးချုချာလာတာ၊ အာရုံစူးစိုက်နိုင်စွမ်း အားနည်းလာတာ၊ အလုပ်မှာ စွမ်းဆောင်ရည် ကျလာတာတွေ ဖြစ်လာနိုင်တယ်။
သံဓာတ် ဟာ လူ့ခန္ဓာကိုယ်အတွက် မရှိမဖြစ် လိုအပ်တဲ့ အာဟာရဓာတ် တစ်မျိုး ဖြစ်ပေမယ့် လွန်ကဲရင်လည်း ဘေးအန္တရာယ်တွေ ရှိနိုင်တာမို့ ကိုယ့်မှာ ချို့တဲ့နေတာ ဟုတ်မဟုတ် မသေချာရင် သံဓာတ်အားဆေးတွေကို ရမ်းမသောက်သင့်ပါဘူး။
တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ သံဓာတ်က အသက်အရွယ်နဲ့ လိင်ကွဲပြားမှုကို မူတည်ပြီး ကွာခြားကြပါတယ်။ ကိုယ်က သံဓာတ်ချို့တဲ့နေတာ မဟုတ်ပါဘဲ အားဆေးတွေ သောက်လို့ တစ်နေ့တာ လိုအပ်တဲ့ ပမာဏထက် လွန်ကဲသွားရင် ဆိုးကျိုးတွေ ရှိပါတယ်။
ဒါ့ကြောင့် သံဓာတ်သီးသန့် အားဆေးတွေကို ဆရာဝန်ညွှန်ကြားချက်နဲ့ သောက်တာ အကောင်းဆုံးပါ။
သဘာဝ ကရတဲ့ အာဟာရဓာတ်
ဒါပေမယ့် ဆရာဝန် မပြချင်ဘူး၊ ဒီတိုင်း သံဓာတ် ပြန်ဖြည့်တင်းချင်တယ် ဆိုရင် သံဓာတ်ကြွယ်ဝတဲ့ သဘာဝ အစားအသောက်တွေ ကနေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။ ပုံမှန်စားနေကျ ထဲမှာပဲ ဒီအစားအစာ တွေကို ထည့်သွင်းစားသောက်ရုံနဲ့ အပေါ်က လက္ခဏာတွေ သက်သာသွားနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
သံဓာတ် ကြွယ်ဝတဲ့ အစားအသောက်များ
(၁) ကမာ သို့မဟုတ် အခွံမာ ပင်လယ်စာ
ခရု၊ ကမာ အပါအဝင် အခွံမာ ပင်လယ်စာတွေက အကောင်းဆုံး သံဓာတ်အရင်းအမြစ်တွေပါ။ သူတို့ကနေ သံဓာတ် အပြင် ပရိုတင်း လို့ခေါ်တဲ့ အသားဓာတ်တွေ၊ တခြား အာဟာရဓာတ်တွေပါ ရနိုင်တယ်လေ။
ပဲလွန်းဖြူဖြူလေးတွေ ပန်းကန်လုံး တစ်ဝက်မှာ သံဓာတ် ၃ မီလီဂရမ်ကျော် ပါဝင်နိုင်ပါတယ်။ သံဓာတ်အပြင် အမျှင်ဓာတ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ပရိုတင်း၊ ကယ်လ်စီယမ်၊ ဗီတာမင် ဘီ အုပ်စုတွေနဲ့ ဓာတ်တိုးဆန့်ကျင်ပစ္စည်းတွေ ပါဝင်ပါသေးတယ်။
(၃) အသည်း နဲ့ ကလီစာ
အသည်း၊ အမြစ် အပါအဝင် တိရစ္ဆာန်ကိုယ်တွင်းကလီစာတွေက အာဟာရပြည့်ဝလှပါတယ်။ အသည်း၊ ကျောက်ကပ်၊ နှလုံး၊ ဦးနှောက် အစုံပဲပေါ့။
ဥပမာ အမဲအသည်း ၁၀၀ ဂရမ်မှာ သံဓာတ် ၆.၅ မီလီဂရမ် ပါရှိပါတယ်။
ကလီစာ တွေစားရင် ပရိုတင်းနဲ့ ဗီတာမင် ဘီအုပ်စုဝင်တွေ၊ ဗီတာမင် အေ၊ ဆယ်လီနီယမ် စတဲ့ အာဟာရဓာတ်တွေ ရရှိနိုင်ပါတယ်။
(၄) အနီရောင် အသား
အမဲသား၊ ဝက်သား၊ ဆိတ်သား တို့အပါအဝင် အနီရောင်အသားတွေမှာ သံဓာတ်ကြွယ်ဝပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် သံဓာတ်အားနည်းနိုင်တဲ့ လူနာတွေကို ကျန်းမာရေးလိုအပ်ချက် အရ အမဲသားစားဖို့ ဆရာဝန်တွေက အကြံပြုလေ့ ရှိတာပါ။
အသားမှာ ပရိုတင်း၊ ဇင့်၊ ဆယ်လီနီယမ်နဲ့ ဗီတာမင် ဘီ အုပ်စုဝင်တွေ အများကြီး ပါဝင်နေပါသေးတယ်။
(၅) ပဲနီလေး၊ ပဲဝါလေး
သက်သတ်လွတ် အနေနဲ့ သံဓာတ်ရရှိနိုင်တဲ့ အရင်းအမြစ်ကတော့ ပဲနီလေးနဲ့ ပဲဝါလေးတို့လို ပဲအမျိုးအစားတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီပဲတွေရဲ့ ၁၀၀ ဂရမ် မှာ သံဓာတ် ၃ မီလီဂရမ်ကျော် ပါဝင်ပြီး အမျှင်ဓာတ်၊ အသားဓာတ်၊ ဗီတာမင် ဘီတွေ၊ မဂ္ဂနီဆီယမ်နဲ့ ဇင့်ဓာတ်တွေလည်း ကြွယ်ဝပါတယ်။
အရသာဆိမ့်တဲ့ ရွှေဖရုံစေ့တွေဟာ စားလို့ ကောင်းပြီး အာဟာရပြည့်တဲ့ သရေစာ တစ်မျိုးပါပဲ။ ဖရုံစေ့ ၂၈ ဂရမ်မှာ သံဓာတ်၂.၅ မီလီဂရမ် ပါဝင်သလို ဗီတာမင် ကေ၊ ဇင့်နဲ့ မဂ္ဂနီဆီယမ်တို့လည်း ကြွယ်ဝပါတယ်။
အစိမ်းရင့်ရောင် အသီးအရွက်တစ်မျိုး ဖြစ်တဲ့ ဟင်းနုနွယ် ဟင်းတစ်ခွက်စာမှာ သံဓာတ်၆.၅ မီလီဂရမ် ပါဝင်ပါတယ်။ သူ့မှာ ကယ်လ်စီယမ်၊ ပိုတက်စီယမ်၊ ဗီတာမင် စီ၊ ဗီတာမင် ကေနဲ့ အမျှင်ဓာတ်တွေလည်း ပါဝင်မှု များပါတယ်။
သံဓာတ်ဟာ ခန္ဓာကိုယ်က သူ့အလိုလို မထုတ်လုပ်နိုင်တဲ့ အာဟာရဓာတ် ဖြစ်တာကြောင့် နေ့စဉ်လိုအပ်ချက်ပမာဏကို ပုံမှန်စားသောက်ရင်း ဖြည့်တင်းပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။
သွေးအားနည်းခြင်းအတွက် သင့်တော်သော အစားအစာများ
သင့် ကျောက်ကပ် ကို သဘာဝအတိုင်း သန့်စင်ပေးနိုင်မယ့် အစားအစာများ
ဂျူးဖူးလေး ကပေးတဲ့ ကျန်းမာရေး တွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲ......... စားလို့ ကောင်းတဲ့ ဂျူးဖူးလေးက အခုလို ကျန်းမာရေး အကျိုးကျေးဇူးတွေ ရရှိစေနိုင်ပါတယ်။
တောင်ကြီးပဲလှော် စားရင်း ရမယ့် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများ
တောင်ကြီးပဲလှော် စားရင်း ရမယ့် ကျန်းမာရေး ကောင်းကျိုးများက ဘာတွေများ ဖြစ်မလဲ။ သေသေချာချာ သိရအောင် ဆောင်းပါးလေးကို ဖတ်ကြည့်နော်။
ကျန်းမာစွာ စားသောက်ခြင်း, အာဟာရဆိုင်ရာ အချက်အလက်များ စက်တင်ဘာ 2, 2021 .2mins read